फोटोशपमा कसरी एक साधारण तस्वीर मोन्टेज बनाउने क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशप यथार्थपरक फोटोमन्टेजहरू बनाउनका लागि सबैभन्दा उपयोगी ग्राफिक डिजाइन प्रोग्रामहरू मध्ये एक हो। केहि युक्तिहरू र बिभिन्न तरिकाहरूको प्रयोग गरेर तपाईंले अविश्वसनीय कम्पोजिटहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यस पोष्टमा म तिनीहरू मध्ये केही प्रकट गर्न जाँदैछु। एक उदाहरण बाट, म तपाईंलाई चरण by चरण फोटोशपमा सरल फोटोमन्टेज कसरी बनाउने भनेर सिकाउन जाँदैछु यो सम्झना छैन!
1 फोटोहरू खोल्नुहोस् र विषय चयन गर्नुहोस्
1.1 कसरी Photoshop छाया पुन: प्राप्ति गर्ने
2 विषयको दुई तहहरूलाई शीशाको कागजातमा ल्याउनुहोस्
3 फोटोशपमा गिलास प्रभाव उत्पन्न गर्नुहोस्
3.1 गिलासको दुई पटक चयन
4 पछिल्ला चालहरू
फोटोहरू खोल्नुहोस् र विषय चयन गर्नुहोस्
हामीले गर्न लाग्ने पहिलो कुरा भनेको दुई फोटोहरू खोल्नुहोस् जुन फोटोमन्टेज बन्छ, प्रत्येक एक अलग कागजात मा. तपाईंलाईaको फोटो चाहिन्छ क्रिस्टल गिलास र बसिरहेको व्यक्तिको तस्वीर. आउनुहोस्, केटीको तस्बिरमा पहिले जाऔं, हामी यसलाई फोटोपोन्टेजमा थप्नका लागि तयार गर्दैछौं।
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो नक्कल पृष्ठभूमि तह। तपाईं यसलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको कम्प्युटर कमान्ड + c मा टाइप गर्नुहोस् र जब + v (यदि तपाईं म्याकको साथ काम गर्नुहुन्छ भने) वा नियन्त्रण + c र नियन्त्रण + v (यदि तपाईं विन्डोसँग काम गर्नुहुन्छ भने)। यो नयाँ लेयरमा हामीले सिर्जना गरेका छौं केटी छनौट गरौं। यस अवस्थामा मैले चयन विषय उपकरण प्रयोग गरेको छु। अब छविमा क्लिक गरेर जुन माथिल्लो छविमा चिनो लगाइएको छ, तह मास्क बनाउनुहोस्। जाँच गर्नुहोस् कि त्यहाँ कुनै त्रुटिहरू छैनन्, यदि तपाइँ कुनै देख्नुहुन्छ भने, याद गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई लेयर मास्कमा गएर र यसमा पछाडि कालो ब्रशको साथ र सेता ब्रशको साथ पत्ता लगाउनलाई चित्रण गरेर यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग पृष्ठभूमिबाट छुट्टिएकी केटीसँग पहिले नै तह हुनेछ, तर यस प्रक्रियामा हामीले छायाँ हरायौं भाग्यवस हामी तिनीहरूलाई फिर्ता पाउन सक्छौं।
कसरी Photoshop छाया पुन: प्राप्ति गर्ने
तलको तहले छायालाई कायम राख्छ, त्यसैले तिनीहरूलाई त्यहाँबाट फिर्ता लिनका लागि। शीर्ष तह लुकाउनुहोस्, र एउटा तह सिर्जना गर्नुहोस् खैरो समान रंग तटस्थ, सबै तरिका तल तल राख्नुहोस्।
अब हामी यसको प्रयोग गर्नेछौं कोष इरेजर उपकरण, तपाईं उपकरणपट्टीमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईं सामान्य इरेज़र उपकरणमा होल्ड गर्नुभयो, र केटीको तहमा जुन हामीले अहिले सम्म सम्पादन गरेका छैनौं हामी सेतो पृष्ठभूमि मेटाउनेछौं छवि, छाया मेट्न नदिन एकदम सावधान हुँदै।
अन्त्यमा, सामान्य इरेजर प्रयोग गर्नुहोस्, र एक प्रसार गोलाकार टिप र अस्पष्टताको साथ खेल्दा थप सेडि shaको स्थान खाली गर्दछ। अन्तमा, "छवि", "सेटिंग्स" मा जानुहोस्, "विशिष्ट"। तपाईले मात्र गर्नु पर्छ ब्लेन्डिंग मोड परिवर्तन गर्नुहोस् तह बाट "गुणा" y खैरो लेयर मेटाउनुहोस् यो साधारण ट्रिकको साथ हामीले छायाहरू पुन: प्राप्त गर्नेछौं!
विषयको दुई तहहरूलाई शीशाको कागजातमा ल्याउनुहोस्
हामी चयन गर्नेछौं दुबै तहहरू y हामी तिनीहरूलाई शीशाको कागजातमा टाँस्नेछौं। तपाईं दुबै तहहरू चयन गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई तान्नुहोस् संग उपकरण सार्नुहोस् अर्को कागजातमा हामी फोटोमन्ट्याजका साथ सुरु गर्न तयार छौं!
केटीको दुई तहहरू लिंक गर्नुहोस् तिनीहरूलाई सजिलैसँग ह्यान्डल गर्न सक्षम हुन। तपाईंको कम्प्युटर कमान्ड + t (यदि तपाईं म्याकको साथ काम गर्नुहुन्छ) वा नियन्त्रण + t (यदि तपाईं विन्डोसँग काम गर्नुहुन्छ) मा टाइप गर्नुहोस् गिलासको स्थानमा आकार अनुकूल गर्दछ। तस्विरलाई अलिकता घुमाउनुहोस् ताकि परिप्रेक्ष्य पनि मिल्दछ। विकल्प (म्याक) वा Alt (विन्डोज) कुञ्जी थिच्न सम्झनुहोस् ताकि यो विकृत नहोस्। इरेजरको साथ किनाराहरू देखिने छन् हटाउछ पृष्ठभूमि जुन हामीले अघिल्लो चरणमा हटायौं।
फोटोशपमा गिलास प्रभाव उत्पन्न गर्नुहोस्
अब हामी त्यो गिलास प्रभाव उत्पन्न गर्न जाँदैछौं जसले यस्तो लाग्छ कि केटी गिलास भित्र छ। पहिले, oतहहरू कल्ट गर्नुहोस् केटी को। अब शीशा तहमा जानुहोस् र यसलाई चयन गर्नुहोस्। तपाईले छनौट गर्ने उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले चाहानुहुन्छ, म सुझाव दिन्छु कि तपाईले वस्तु चयन उपकरण वा छिटो चयन उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईले देख्नु भयो कि छनोट एकदम सटीक भएको छैन भने तपाई द्रुत मास्क मोड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्रुटिहरुलाई सच्याउनका लागि।
गिलासको दुई पटक चयन
तपाईंले चयन नक्कल गर्नु पर्छ। यो गर्नका लागि तपाईले कमाण्ड + सी र कमांड + v (म्याक) टाइप गर्नुहोस् वा नियन्त्रण + सी र नियन्त्रण + वी (विन्डोज) तपाईको कम्प्युटरमा टाइप गर्नुपर्नेछ। अब, माथि राख्नुहोस् नयाँ लेयर उत्पन्न गर्न र सबै लेयरहरू देख्न छाड्दछ। यो नयाँ तहको अस्पष्टतासँग खेल्दा हामीले त्यो गिलास प्रभावको नक्कल गर्न सक्थ्यौं, तर म तपाईंलाई यो गर्नका लागि अझ बढी पेशेवर तरीका देखाउँदैछु!
"छवि"> "सेटिंग्स"> "विशिष्टमा जानुहोस्"। र त्यसपछि जानुहोस् "छवि"> "सेटिंग्स"> "स्तरहरू"कालो ड्रॉपरको साथ, तपाईं क्लिक गर्न जाँदै हुनुहुन्छ सम्म तपाईं केवल कालो र सेतो रंग मात्र बाँकी पाउनुभयो। TOपहाड ब्लेन्डिंग मोडलाई "रास्टर" मा बदल्नुहोस् तपाईले त्यो प्रभाव सिर्जना गर्न पहिल्यै व्यवस्थित गरिसक्नुहुनेछ! कसरी?
मैले समाप्त गर्नु भन्दा पहिले मलाई तपाईलाई देखाउनुहोस् केहि थप तरिकाहरू यसले तपाईंको फोटो मोन्टेजलाई अझ यथार्थपरक बनाउनेछ। गिलास भित्र वा पछाडिको सबै चीज विकृत गर्दछ, हामी त्यो प्रभाव अनुकरण गर्न सक्छौं। केटीको केपमा ट्याबमा जानुहोस् "फिल्टर", "ब्लर", "गौसी ब्लर"। प्रभाव सेटिंग्स विन्डोमा जुन स्वचालित रूपमा खुल्छ, को लागी ०.। वा ०.। मा एक ब्लर सेट गर्नुहोस्, त्यो पर्याप्त हुनेछ।
अहिले ट्याबमा जानुहोस् «फिल्टर», «विकृत», «zig Zag ", र हामी प्यारामिटरहरू सार्न गइरहेका छौं प्रभाव सेटिंग्स विन्डोमा देखा पर्ने केटीलाई अशुभ बनाउन।
अर्को चाखलाग्दो विकल्प केटीको तहको अस्पष्टतालाई अलि कम गर्नु हो। त्यसैले यो त्यस्तो गहन र colorsहरू छैन। यदि त्यहाँ दुई तस्बिरहरूका बीच टोनमा एकदम कठोर परिवर्तन भएको छ भने, तपाईं यसलाई ठीक गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाइँलाई यहाँ एक ट्यूटोरियल लिंक गरिएको छोड्दछु जसमा मैले एक धेरै साधारण ट्रिकको वर्णन गर्दछु दुई फोटोहरूको टोन मिलाउनुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » फोटोशपमा कसरी एक साधारण तस्वीर असेंबल बनाउने
लिडा एंजेलिका मोरेनो भन्यो
LIDA ANGELICA MORENO लाई जवाफ दिनुहोस्
र Color्ग थ्योरी: र Com्ग संयोजनका लागि आधारभूत गाईड
मंडलहरू नि: शुल्कका लागि रंगमा डाउनलोड गर्नका लागि तयार छन्